I-Luxury Lower Level eMilaca - I-Airbnb
I-Luxury Lower Level eMilaca
Coca KAKUHLE NGENTO YOKUBULALA IINTSHOLONGWANE. Uza kuba nezinga elisezantsi lendlu yobunewunewu kunye negumbi lokulala elikhulu elinebhedi enkulu kunye nedesika. Uza kuba negumbi elikhulu losapho elinebhedi enkulu, isofa yecawa kunye neTV enkulu ukuze ukonwabele. Ngapha koko, uza kulithanda igumbi lakho lokuhlambela labucala elineshawa enkulu enentloko yeshawa eneemvula. Ikhitshi elikumgangatho ophezulu. Ndineveranda entle ngasemva endlwini ukuze ndonwabe xa imozulu intle.
Le ndawo ikufutshane ne-Highway Highway e MIlaca. Yimizuzu eyi-60 ukusuka eMinneapolis nemizuzu eyi-30 ukuya eSt. Cloud okanye eLake Mille Lacs. Ehlotyeni, ndinendawo yokupaka engasemva kwendlu yesikhephe sakho! Hlala apha ebusuku uze wonwabele iLake Mille Lacs emini!
Ichibi i-Mille Lacs liqhuba imizuzu eyi-30. Ikwindawo ekhuselekileyo enabamelwane abanobubele kakhulu. Ukufikelela lula kwi-Highway 23 kunye ne-Highway. Kufuphi nedolophu i-Milaca kunye nevenkile yokutya i-Teals, i-Pizza Central, i-Jiggers kunye nomgama wokuba ungahamba ngeenyawo ukuya e- Kwik Trip, isikhululo segesi se-Hardee kunye neHolide. Kufuphi neepaki ezikufutshane kunye noMlambo iRum.
Ndiza kuba sekhaya ixesha elithile kwaye ndikulungele ukuphendula imibuzo nanini na.